ဇန်နဝါရီလ 2016 | 8 ၏စာမျက်နှာ 16 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2016 » ဇန္နဝါရီလ (စာမျက်နှာ 8)
ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံအထူးကုJüngerအသံကျယ်လောင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်လိုလားသူအသံစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အသံအပြောင်းအလဲနဲ့ထုတ်ကုန်များ၏အကွာအဝေးနှင့်အတူ (Z2-109 ရပ်) ဒူဘိုင်းအတွက်ယခုနှစ် CABSAT ပြပွဲတက်ရောက်ခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါလိုင်း-up, Jüngerအသံရဲ့မြေပြင်ကိုချိုးဖောက်: D * AP4 (လေးchannel¬) နှင့်အသံထှကျပွင့်လင်းကျယ်လောင်ကမ်းလှမ်းသောကုမ္ပဏီ၏စီးပွားဖြစ်အဆင့်ကို Magic ™ algorithm ကို, featuring: D * AP8 (ရှစ်ချန်နယ်) ပရိုဆက်ဆာများပါဝင်သည် ...
ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံအထူးကုJüngerအသံကျယ်လောင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်လိုလားသူအသံစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အသံအပြောင်းအလဲနဲ့ထုတ်ကုန်များ၏အကွာအဝေးနှင့်အတူ (Z2-109 ရပ်) ဒူဘိုင်းအတွက်ယခုနှစ် CABSAT ပြပွဲတက်ရောက်ခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါလိုင်း-up, Jüngerအသံရဲ့မြေပြင်ကိုချိုးဖောက်: D * AP4 (လေးရုပ်သံလိုင်း) နှင့်အသံထှကျပွင့်လင်းကမ်းလှမ်းသောကုမ္ပဏီ၏စီးပွားဖြစ်အဆင့်ကို Magic ™ algorithm ကို, featuring: D * AP8 (ရှစ်ချန်နယ်) ပရိုဆက်ဆာများပါဝင်သည် ...
ဗီဒီယိုကိုဖုန်းများအတွက် '' Pix-E5 4K မှတ်တမ်းတင်စောင့်ကြည့် KMOV စတူဒီယိုမှာအာရုံစိုက်ထဲသို့ရုပ်ပုံဆောင်ကြဉ်း
ပီကင်း, တရုတ်, ဇန်နဝါရီ 20, 2016 - ကြီးပြင်းကျောက်ခေတ် Johnston ကအမြဲသီချင်းနှင့်ဓာတ်ပုံများအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ Johnston သူအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးနှင့်အတူနှစ်ခုပေါင်းစပ်နိုင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူ့အစ်ကို Adrian နှင့်အတူသူသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီအဖြစ် KMOV Studios ကစတင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ Johnston နေထိုင်ပြီးသူအများစုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အလုပ်ဆီသို့ gravitates ဘယ်မှာဘေဂျင်းတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ နှင့် ...
ဧဝံဂေလိတရားကိုအသံလွှင့်ကွန်ယက် Myers '' ProTrack နှင့်အတူသို့ပြန်သွားရန်-ရုံးစစ်ဆင်ရေးက Universal ထိန်းချုပ်ရေးရှေ့ဆက်ဘာ
Northampton MA, ဇန်နဝါရီလ 20, 2016 - Myers, ထုတ်လွှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲဦးဆောင်ပြုစုသူ, ဧဝံဂေလိတရားကိုအသံလွှင့်ကွန်ယက် (GBN) က၎င်း၏ ProTrack အသံလွှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အကောင်အထည်ဖော်ထားပြီးကြေညာခဲ့သည်။ GBN, 24 နာရီတစ်ရက်ထုတ်လွှင့်သည့်အမေရိကန်ခရစ်ယာန်ဂြိုဟ်တုထုတ်လွှင့်ကွန်ရက်တစ်ခု, သူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဝယ်ယူအစီအစဉ်ကိုအကြောင်းအရာကျော်စုစုပေါင်းထိန်းချုပ်မှုများကို၎င်း၏စွမ်းရည်အပေါ်အခြေခံပြီး ProTrack ရွေးချယ်ထားကြသည်။ ProTrack ကိုလည်းရရှိ ...
SDI မှစ. IP ကိုမှရီးရဲလ်အချိန်မီဒီယာပို့ဆောင်ရေးရွှေ့ပြောင်းအပေါ်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုင်ထားမှSMPTE®ဗြိတိန်ပုဒ်မ
SMPTE ဗြိတိန်ပုဒ်မအမှတ်တံဆိပ်ဒေါင်လိုက်အတိတ်မှသတင်း RSS ကိုလန်ဒန်, Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားEngineers® (SMPTE®), ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပညာရေးအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး၏ Society ရဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံ (PRWEB) ဇန်နဝါရီ 20, 2016 အဆိုပါယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း (UK) ပုဒ်မဦးလွတ်မြောက် ဆက်သွယ်ရေး, မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, နှင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ယနေ့က "ရီးရဲလ်အချိန်မီဒီယာပို့ဆောင်ရေးအမည်ရတစ်ရက်ကြာမြင့်စွာဆွေးနွေးပွဲအားအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပလိမ့်မည်ဟုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် - မှစ. ...
XenData မိတ်ဆက် LTO-7 ကွန်ယက်မော်ကွန်းတိုက် System ကိုပူးတွဲ
ဘက်ပေါင်းစုံ archive ကို system ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုက applications များ walnut Creek အဘိဓါန်, ကာလီဖိုးနီးယားများအတွက် optimized ကုန်ကျ-ထိရောက်သောကွန်ရက်ကသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည် - ။ XenData, မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းဗီဒီယို archive ကိုဖြေရှင်းချက်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူ, ယနေ့က၎င်း၏အသစ်အ SXL- ၏ပစ်လွှတ်နှင့်ချက်ချင်းရရှိနိုင်မှုထုတ်ပြန်ကြေညာ 8 archive ကိုစနစ်များကို။ ဤရွေ့ကား XenData ရဲ့ SX-250 archive ကိုဆာဗာနှင့်တက်ရရှိထားသူတစ်ဦး LTO-7 autoloader အပေါ်အခြေခံထားတယ် ...
RSP မှာ Houdini သင်တန်း
Kurt Debens, ဗင်္ယာမိန် Holen နှင့်နစ်ခ်ပိန်အသုံးပြုမှု UniSA / RSP မီဒီယာနေရာထားရှိ Professional က Careers Adelaide တစ် Springboard အဖြစ်, တောင်သြစတြေးလျ-Houdini, ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု '' 3D ကာတွန်းဆော့ဖ်ဝဲ, Rising Sun ကရုပ်ပုံများမှာကျောင်းအုပ်ကြီး tool တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အခြားအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုစတူဒီယိုမှာ (VFX ) ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်နဲ့ high-end ရုပ်မြင်သံကြား VFX အတွက်စေ့စပ်။ အဆိုပါ software ကိုယင်း၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဒီဇိုင်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်များအတွက်တန်ဖိုး ...
base မီဒီယာတိမ်တိုက် Make တီဗီလုပ်ငန်းသိုလှောင်-as-a-ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ Zadara သိုလှောင်ဖြန့်ချထား
19 AM အရှေ့ပိုင်းစံတော်ချိန် Irvine, ကာလီဖိုးနီးယား .- (Business Wired) -Zadara ™သိုလှောင်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း-class ကိုသိုလှောင်မှု-as-a-ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ: McLaren Autosport BRDC ဆုကိုထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီစွမ်းဆောင်ရည်, လုံခြုံရေးနှင့်ရရှိမှုဇန်နဝါရီလ 2016, 09 00 အမှာစကားပြောကြား (STaaS) နှင့် base မီဒီယာတိမ်တိုက်, ယနေ့ Make တီဗီဂုဏ်သတင်း McLaren Autosport ကာလအတွင်း၎င်းတို့၏တင်းကြပ်သောဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုကူညီပံ့ပိုးဖို့ Zadara သိုလှောင် Virtual Private သိုလှောင် Array (VPSA) ရေးအတွက်မူကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာ ...
8 ၏စာမျက်နှာ 16«ပထမဦးစွာ...«678910 » ...နောက်ဆုံး»